Marka aan rakibo muuqaalka HD sida KLAX, waxay u egtahay mid xun
Marka aan rakibo muuqaalka HD sida KLAX, waxay u egtahay mid xun sano 3 2 bilood ka hor #595
Marka aan ku rakibno muuqaal sawireed ah waxay u egtahay inay ka sii darayso inaysan jirin. Maxaan khalad sameynayaa?
Marka aan rakibo muuqaalka HD sida KLAX, waxay u egtahay mid xun 3 sano 1 bil ka hor #605
Waxaa jiri kara sababo yar oo ah natiijadan. Marka hore waa tayada sawirada, iyo nooca. Marka labaad, waxaad leedahay kombiyuutarku waa inuu awoodaa inuu xakameeyo galka sawirada iyo sidoo kale adeegyo kale oo yareynaya. Sida aad ogtahay in MSFS ay tahay awooda ugu badan ee loo adeegsado dayuuradda, iyo inkasta oo barnaamijkii asalka ahaa uu ku dhacay, xaqiiqda ah in Bill Gates uu furay xuquuqda barnaamijka 2007 qofkasta oo doortay inuu shaqeeyo. Xitaa iyada oo aan lahayn STEAM oo leh boqollaal kun oo downloads waxaad awood u leedahay in aad abuurto jawi guud. Run ahaantii, waxaa jira kuwa abuura oo ka yar da'da 20 ee barnaamijkan iyo xaqiiqda ayaa ah midka ugu wanaagsan oo leh aragti fiican oo ah waxa duulimaadku ku saabsan yahay, in ka badan ACE kooxda weyn ee lug ku leh barnaamijka MSFS. Hadda haddii aad rabto wax kuu badbaadin doona sanado badan oo isku dayaya inaad fahamto barnaamijka oo aad ka dhigto mid dhameystiran, waxaa jira laba walxood oo aad u baahan doonto. Marka ugu horeysa waa fsax fsl fps. Tani waa qalab aad u fiican oo cajiib ah, oo sahlan in la isticmaalo oo kuu baro waxa aanad garanayn iyo sida loo fahmo nidaamka. Midda labaad waa FSPS XTREME. Tani waxay ku garaaci doontaa miisaankaaga. Waxaan isticmaalayaa 500 gig 7 sannadka cusub ee laptop by Toshiba.hadelka I5.i waxaa ka sarreeya diyaaradaha 3850, noocyada 459 ee ku darsaday iyo si fiican u diyaargaroobaya shirkadaha 45000 ee ku shaqeeya jadwalka truelife, iyo xataa xitaa wax khafiif ah. waxay ku dhowaatay ilaa toban sano sanadkan si ay u hesho faraskan iyo in ka badan kombiyuutarada 5 iyo ku saabsan 15 dib u soo celiyo iyo tirtiro shaashado madow shixnadaha, oo waxaan dhab ahaantii helay nuqulka qoraalka barnaamijka ka soo microsoft. Waxan ka bartay 2007 macaamiishii Microsoft in ay jiri lahaayeen qalad iyo qaloocyo, haddana maanta oo ay bulshadu ku noolaan doonto si ay uga badbaadaan barnaamijka dheeraadka ah ee aan waligeed ku riyoon karin. Waxaan rajeynayaa in tani ay ka caawisay, su'aal kasta, farriin halkan kaga tagto, xanuunadu kuugu soo laabtaan. Qaar ka mid ah khibradaha ganacsiga, iyo waqti ka dib waxaad baran doontaa. Intaa ka sokow, goobtaada ugu wanaagsan ee halkaan ka baxsan, markaa waxqabadkaagu waa mid wanaagsan. Dhibaatooyinka ai? wax kastoo, aan ogaado. Hesho jawaabta asalka ah ee MSFS. Haddii aanan helin waan heli doonaa.
Marka aan rakibo muuqaalka HD sida KLAX, waxay u egtahay mid xun 3 sano 1 bil ka hor #613
Waad ku mahadsan tahay mareegtada mawduuca si aad u hesho jawaabtaada weyn.
svanarsdel, waxaan jeclaan laheyn in aan ku caawino haddii aad noo soo diri karto qaar ka mid ah shaashadaha, sidaas darteed waxaan kuu sheegi karnaa waxa qaldan.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.234